Ndị nne na nna - ikike anyị. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Dị ka ndị nne na nna, anyị chọrọ ka ụmụ anyị:
-> Na-ewepụ echiche nwoke na nwanyị na mmemme na ụlọ akwụkwọ.
-> A na-etinye mmemme mmegbu ahụ nke na-aza ụdị mmegbu niile n'ụlọ akwụkwọ.
-> Ndị nkuzi ahụ nwere ụkpụrụ nduzi siri ike banyere ihe a na-akụzi n'ihe gbasara mmekọahụ.
-> Mmemme mmemme nwoke na nwanyị laghachiri na nkuzi gbasara mmụta banyere mmekọahụ.
-> Ewepu onyoonye nwoke na nwanyi na mmeko nwoke na nwanyi.
-> Ihe mmemme nwoke a kwesịrị afọ.
-> Aremụaka ahụ agaghị emebi iwu site na-enye ha ndụmọdụ ka ha zochie ihe nzuzo ha.
-> Na nne na nna ahụ enweghị ohere iji ọdịnaya nke ihe ọ bụla ememme gbasara mmekọahụ.
-> Enweghị ụmụaka ahụ ohere ịnweta weebụsaịtị nke metụtara mmekọahụ na mmekọahụ.
-> Na nne na nna ahụ nwere ikike ikpebi ụkpụrụ omume nwa ha.
-> Temụaka ahụ, site na nkwado ezinụlọ, ka enyere ha aka idozi nsogbu ọ bụla gbasara okike.
-> Na nne na nna ahụ nwere ikike ikpebi ụzọ nwa ha na ndụ.